Iindaba-Thelekisa iindlela ezahlukeneyo zokucinezela
Thelekisa iindlela ezahlukeneyo zokucinezela
Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokufumana ioyile yemifuno. Umzekelo wendlela yokucinezela yomzimba, indlela yokucinezela ngesanti kubunzulu baphantsi, indlela yokusombulula isinyibilikisi njalo njalo. Inkqubo yokucinezela yomzimba ebonakalayo ine-cofa ixesha elinye kwaye cinezela kabini, umatshini oshushu kunye nomatshini wokubanda. Ngaba uyazi ukuba yintoni umahluko phakathi kweendlela zokucinezela zomzimba?
І. Umahluko wokucinezelwa kwakanye kunye nokucofa kabini:
1.Ioyile eseleyo kwikhekhe: zombini cinezela ixesha elinye kunye nokucinezela kabini malunga ne-6-8%, kuxhomekeke kwimodeli yeoyile yeefayile ezahlukeneyo.
2.Izixhobo ezisetyenzisiweyo kushicilelo lokuqala zingaphantsi kunaleyo yesibini, egcina iindleko; ioyile ekrwada kushicilelo lwesibini kulula ukuyicoca kwaye ineoyile yentsalela encinci.
Ⅱ. Umahluko wokushicilela oshushu kunye nomatshini obandayo:
Ukucofa i-1.Cold kukucinezela ioyile ngaphandle kokufudumeza okanye iqondo lobushushu eliphantsi ngaphambi kokucinezela, kwaye phantsi kwendalo engaphantsi kwe-60 ℃, ioyile icudisiwe ngobushushu obuphantsi kunye nexabiso leasidi. Ngokubanzi, ayifuni kulungiswa. Emva kwemvula kunye nohluzo, imveliso yeoyile ifunyenwe. Umbala weoyile ulungile, kodwa incasa yeoyile ayinuki kwaye isivuno seoyile sisezantsi. Ngokuqhelekileyo kufanelekile ukunyanzeliswa kweoli ephezulu.
2. Ukucinezela okushushu kukucoca kunye nokutyumza ioyile kwaye emva koko uyitshise kubushushu obuphezulu, obangela uthotho lotshintsho ngaphakathi kwisityalo seoyile, njengokutshabalalisa iseli yeoyile, ukukhuthaza iproteni denaturation, ukunciphisa i-viscosity yeoyile, njl. Ukulungela ukucinezela ioyile kunye nokonyusa imveliso yeoyile. Itekhnoloji yokucinezela eshushu isetyenziselwa imveliso enkulu kunye nokulungiswa kweoyile enokutyiwa, ngevumba elimnandi, umbala omnyama kunye nokuveliswa kweoyile ephezulu, kodwa kulula ukubangela ukulahleka kwezakhamzimba kwimathiriyeli eluhlaza.
Ixesha Post: Jan-06-2021
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Zonke iiMveliso Imbewu yeNtengiso yeoyile, Umatshini wokushicilela weoyile encinci, Imithombo yeendaba yeoyile yeOlive, Umthengisi weoyile, Umatshini wokushicilela ioyile, Ingqele Cofa Umatshini weoyile,